I-CDC Official Exits Agency Ngemuva Kokuxhuma KweCoca-Cola Kuvele Ekukhanyeni
Posted on July 1, 2016 by UCarey Gillam
Umholi ongumakadebona ngaphakathi kwe- Centers for Disease Control and Prevention umemezele ukushiya kwakhe ngokushesha kule nhlangano ngoLwesine, ngemuva kwezinsuku ezimbili kuvele ukuthi ubelokhu enikeza umhlahlandlela kommeli ohola phambili weCoca-Cola obefuna ukuthonya iziphathimandla zezempilo emhlabeni ezindabeni zenqubomgomo kashukela neziphuzo.
Endimeni yakhe e-CDC, uDkt.Barbara Bowman, umqondisi weCDC's Division for Heart Disease and Stroke Prevention, ubambe iqhaza ezinhlelweni eziningi zezinqubomgomo zezempilo zalesi sigaba esibhekele ukuhlinzeka “ngobuholi bezempilo emphakathini.” Uqale umsebenzi wakhe eCDC ngo-1992.
Umphathi kaBowman, u-Ursula Bauer, uMqondisi, Isikhungo Sikazwelonke Sokuvimbela Izifo Ezingamahlalakhona Nokugqugquzela Ezempilo, uthumele i-imeyili kubasebenzi ngemuva indaba yami kaJuni 28 kule bhulogi wembula ukuxhumana kweCoca-Cola. Kuleyo imeyili, ukuqinisekisile ukunemba kwalo mbiko, kanti ngenkathi evikela okwenziwe nguBowman, uthe “umbono abanye abafundi abangase bawuthathe kulesi sihloko awulungile.” Ubuye waxwayisa abasebenzi ukuthi bagweme ukwenza okufanayo, ethi lesi simo “siyisikhumbuzo esibalulekile sesisho esidala sokuthi uma singafuni ukusibona ekhasini lokuqala lephephandaba akumele sikwenze.”
Ukuphuma kukaBowman kumenyezelwe ngama-imeyili angaphakathi. UBowman utshele ozakwabo nge-imeyili yeCDC ethunyelwe ngoLwesine ukuthi uthathe isinqumo sokuthatha umhlalaphansi “ngasekupheleni kwenyanga edlule.” Akazange akhulume ngezambulo mayelana nokuxhumana kwakhe neCoca-Cola nanoma yikuphi okunye okukhathazayo.
UBauer uthumele i-imeyili ehlukile kushayelwa ihlombe umsebenzi kaBowman neCDC. “UBarbara usebenze ngokugqama futhi ubengusomabhizinisi oqinile, onobuhlakani, ozinikele nosekelayo. Uzokhunjulwa kakhulu yisikhungo sethu neCDC, ”kusho uBauer kule imeyili.
Ukuhamba kukaBowman kuza ngesikhathi lapho imibuzo eminingana mayelana noBowman nomnyango wakhe befuna le nhlangano, ngokusho kwemithombo engaphakathi kweCDC. Ngaphezu kwemibuzo ephathelene nobudlelwano beCoca-Cola, obuzama ngamandla ukubuyisela emuva kuzinqubomgomo ezilawula noma zokuvuselela iziphuzo ezibandayo, kunemibuzo mayelana nokusebenza nokusebenza obala kohlelo olwaziwa ngokuthi OhlakaniphileWoman, enikeza abesifazane abahola kancane, abangaphansi komshuwalense noma abangaqinisekisiwe abanezifo ezingamahlalakhona ezihlola ubungozi, izinhlelo zokuphila, kanye nezinsizakalo zokudlulisela emzameni wokuvimbela isifo senhliziyo nemithambo yegazi. Ukuhamba nakho kuza ngosuku ngemuva kwenhlangano engiyisebenzelayo - I-US Ilungelo Lokwazi - ufake enye i-FOIA efuna ukuxhumana okwengeziwe.
Ukuxhumana kweCoca-Cola kubuyele emashumini eminyaka uBowman, futhi kumbophele kowayengumphathi omkhulu weCoca-Cola kanye nochwepheshe u-Alex Malaspina. IMalaspina, ngosizo lukaCoca-Cola, yasungula iqembu lezimboni eliphikisayo i-International Life Sciences Institute (ILSI). Ngokusho kwemithombo, uBowman uphinde wasebenza ekuqaleni komsebenzi wakhe wokuba isazi esiphakeme sezokudla kwaCoca-Cola, futhi wabhala ngokubambisana uhlelo lwencwadi olubizwa ngePresent Knowledge in Nutrition njenge Incwadi ye-International Life Sciences Institute. ”
Isithunzi se-ILSI sesingatshazwa amahlandla amaningi ngamasu eliwasebenzisile ukuzama ukuguqula inqubomgomo yomphakathi ezindabeni ezihlobene nezempilo.
Ukuxhumana nge-imeyili okutholwe yi-US Right to Know ngezicelo zombuso ze-Freedom of Information kuveze ukuthi uBowman ubonakale ejabule ukusiza iMalaspina, eyayingumholi ophambili kwezesayensi nezomthetho eCoca-Cola, kanti imboni yeziphuzo iqinisa ezombusazwe neWorld Health Organisation. Ama-imeyili akhombise iMalaspina, emele intshisekelo yeCoca-Cola ne-ISLI, bekhala ngokuthi iWorld Health Organisation ihlinzeka ngehlombe elibandayo i-ILSI. Izintambo ze-imeyili zifaka phakathi imibiko yokukhathazeka mayelana ne-Coca-Cola Life entsha kaCoca-Cola, enziwe nge-stevia, kanye nokugxekwa ukuthi isenoshukela omningi kunomkhawulo wosuku onconywe yi-WHO.
Ezokuxhumana zifike njengoba imboni yeziphuzo ibilokhu ixega ochungechungeni lwezenzo emhlabeni wonke ukunqanda ukusetshenziswa kweziphuzo ezibandayo ezinoshukela ngenxa yokukhathazeka ngezixhumanisi zokukhuluphala kanye nohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2.
Igalelo elibucayi lafika ngoJuni nyakenye lapho uMqondisi Jikelele weWorld Health Organisation (WHO) uMargaret Chan ethi ukumakethwa kweziphuzo ezinoshukela ogcwele kube nomthelela omkhulu ekukhuleni kokukhuluphala kwezingane emhlabeni wonke, ikakhulukazi emazweni asathuthuka. I-WHO ishicilele umhlahlandlela omusha kashukela ngoMashi 2015, kanti uChan uphakamise imikhawulo ekusetshenzisweni kwesiphuzo esinothe ngoshukela.
IMexico isivele isiyisebenzisile eyayo intela yesoda ngo-2014, futhi amadolobha amaningi ase-US nasemhlabeni wonke njengamanje acubungula imingcele enjalo noma izikhubekiso, njengezintela ezengeziwe, kanti ezinye sezivele zikwenzile lokho. Intela yesoda yaseMexico ihambisane nokwehla kokuthengwa kwesoda, ngokusho kocwaningo olushicilelwe ekuqaleni konyaka.
Okhulumela iCDC uKathy Harben uthe ekuqaleni kwaleli sonto ukuthi ama-imeyili awakhombisi ukungqubuzana noma inkinga. Kodwa uRobert Lustig, uProfesa Wezingane e-Division of Endocrinology e-University of California, eSan Francisco, uthe i-ILSI “yisiqhema esiphambili embonini yezokudla.” Ubuye waveza ukuthi iCDC kusamele ibhekane nokunciphisa ukusetshenziswa koshukela, yize i-WHO ikhathazeka ngokuxhumana nezifo.
Ukuhwebelana ngama-imeyili kukhombisa ukuthi uBowman wenze okungaphezulu kokumane aphendule imibuzo evela eMalaspina. Ubuye waqala ama-imeyili wathumela nemininingwane ayithola kwezinye izinhlangano. Ama-imeyili amaningi kaBowman aneMalaspina atholakele futhi athunyelwa nge-akhawunti yakhe ye-imeyili, noma kokunye kokuxhumana, uBowman wathumela imininingwane evela kwikheli lakhe le-imeyili leCDC kwi-akhawunti yakhe ye-imeyili ngaphambi kokuyabelana neMalaspina.
I-ILSI ibe nobudlelwano obude nobubheke phansi neWorld Health Organisation, isebenze ngasikhathi sinye eduze neFood and Agricultural Organisation yayo (i-FAO) kanye ne-WHO's International Agency for Research on Cancer kanye ne-International Programme of Chemical Safety.
Kodwa umbiko womxhumanisi ku-WHO ithole ukuthi i-ILSI yayifaka i-WHO ne-FAO nososayensi, imali kanye nocwaningo ukuze kutholakale ukuthandwa kwemikhiqizo namasu ezimboni. ILSI iphinde yasolwa ngokuzama ukubukela phansi imizamo yokulawulwa kukagwayi ye-WHO egameni lomkhakha kagwayi.
UWHO ugcine eseziqhelelanisa ne-ILSI. Kepha imibuzo ngethonya le-ILSI iphinde yavela kule ntwasahlobo lapho ososayensi behambisana ne-ILSI wabamba iqhaza ekuhloleni i-herbicide glyphosate eyimpikiswano, ekhipha isinqumo esivuna iMonsanto Co kanye nemboni yezibulala-zinambuzane.
(Lo mbhalo uqale ukuvela kuThe Huffington Post http://www.huffingtonpost.com/carey-gillam/cdc-official-exits-agency_b_10760490.html)
Izifo Ezihlobene Nokudla, Uphenyo lwethu, Abathandekayo U-Alex Malaspina, UBarbara Bowman, isiphuzo, CDC, I-CDC Division ye-Heart Disease kanye ne-Stroke Prevention, Coca-Cola, Ukudla, ILSI, I-International Life Sciences Institute, UKathy Harben, Monsanto, Isikhungo Sikazwelonke Sokuvimbela Izifo Ezingamahlalakhona Nokugqugquzela Impilo, ezombusazwe, Ursula Bauer